प्रेस काउन्सिल खारेजको तयारी, जेष्ठ पत्रकारलाई जीवन निर्वाह भत्ता - Suvham News
प्रेस काउन्सिल खारेजको तयारी, जेष्ठ पत्रकारलाई जीवन निर्वाह भत्ता
July 17, 2018 by gsmktm
१ साउन, काठमाडौं । सरकारले प्रेस काउन्सिललाई खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । प्रेस काउन्सिल खारेजी गरेर त्यसको ठाउँमा अधिकार सम्पन्न मिडिया काउन्सिल ऐन ल्याउन लागिएको सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रिी गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।
सञ्चार मन्त्रालयले नयाँ मिडियाहरुलाई समेत समेट्ने गरी आमसञ्चार नीति सम्बन्धि छाता ऐन ल्याउन विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन लागेको हो ।
जेष्ठ पत्रकारहरुलाई जीवन निर्वाह भत्ता
सरकारले जेष्ठ पत्रकारहरुको जीवन निर्वाह भत्ताका लागि अक्षयकोष स्थापना गरेको छ ।
३० वर्षभन्दा लामो समयदेखि निरन्तर पत्रकारिता गरिरहेका र ६५ वर्ष उमेर पुगेका तथा अन्य सरकारी सुविधा नपाउने जेष्ठ पत्रकारलाई मासिक वृत्ति प्रदान गर्न लागिएको हो ।
जेष्ठ पत्रकार वृत्ति कोषमा तत्काल एक करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा यो रकम बढाएर तीन करोड रुपैयाँ पुर्‍याइने र सो रकमको ब्याजबाट मापदण्डभित्र परेका जेष्ठ पत्रकारलाई मासिक बृत्ति प्रदान गरिनेछ ।
जीवनभर पत्रकारितामा संलग्न रहेका र अवकाशको उमेरमा अन्य आयस्रोत नहुने जेष्ठ पत्रकारको सहयोगका लाग बृत्ति कोष सहयोगी हुने सञ्चार मन्त्री बास्कोटाको भनाइ छ ।
Prevविश्वकै चौथो महंगो खेलाडी बने रोनाल्डो
Nextडा. केसी आफ्नो खुशीमा हुनुहुन्छ कि पराधिन ? -प्रधानमन्त्री